I-10 / 02 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: NgoFebhuwari 10, 2020
Abagibeli abayizigidi eziyi-14 Basebenzise Izindiza ngoJanuwari
I-General Directorate of State Airports Authority imemezele izibalo zezindiza, zabagibeli kanye nezithwali zangoJanuwari 2020. Ngokulandelana, ngoJanuwari 2020; Isibalo sezindiza ezifika futhi sezikhumule sezindiza [Okuningi ...]
I-IETT Iguqa Imigubho Yombhubhe kanye neNostalgic Tram Ndawonye
Umlando weKaraköy Tunnel, onguthelawayeka wesibili womhlaba, uzogubha iminyaka yawo engu-145 kwathi uNostalgic Tram, uphawu lweBeyoğlu, uzogubha iminyaka yakhe engama-106. Lo nyaka i-IETT igubha iminyaka eyi-Tunerals neNostalgic Tram ndawonye. NgoLwesibili, ngoFebhuwari 11 [Okuningi ...]
Izimali Zezokuhamba Zentengiso ZaseDenizli Zagxilwa 2019
Denizli Yisibonelo sokulingiswa Turkey nge zokuthutha izimali ukuthi imikhawulo uMasipala Metropolitan, 2019 km asphalt road 140 nge 120 km izindlu imigwaqo eziphathekako eziseceleni Ilokhi benza umsebenzi. Ukudlula kukaMasipala wasedolobheni [Okuningi ...]
Qhubeka Qhubeka nezifundo ze-Antalya Transportation Master Plan
Ngenhloso yokwenza i-Antalya ibe yidolobha elihleliwe, elijwayelekile futhi elingumazisi, ngaphakathi kwenqubo yokubuyekezwa kweTraffic Master Plan, izinkinga zokuhamba zomphakathi zedolobha nezifunda eziyi-19 zisingathwa ngoyedwa. Kulomongo, obanjelwe e-Elmalı [Okuningi ...]
Ngokokuqala ngqa, Umqondisi Wendawo Ka-Ankara Metropolitan EGO General Directorate uhlela ukuqeqeshwa okusebenzayo lapho abashayeli abasebenzisa izimoto zokuhamba zomphakathi bekwazi ukuxhumana kahle nezakhamizi. Sizoqhubeka kuze kube kuphela uFebhuwari [Okuningi ...]
IManisa Metropolitan Disinfives Izimoto Zokuhamba Komphakathi
Ngokubambisana noMnyango weMicimbi Yezempilo kaMasipala waseManisa Metropolitan, kwaqalwa ukubulala amagciwane ezimotweni ezinikezela ngezinsizakalo zokuhamba emphakathini naphakathi kwamadolobha aseManisa. Izinkulungwane nsuku zonke eManyisa [Okuningi ...]
Umlando Paşabahçe Ferry Pulls uye ku-Haliç eRenewal
Ngenkathi ngilinde usuku lwe-razor ogwini lwaseBeykoz, umgwaqo uPaulabahçe Ferry ongumlando, odluliselwe eCity Lines futhi nokuqaliswa kwe-IMM, waqala ukudonswa e-Haliç Shipyard ukuze kulungiswe futhi kulungiswe. Umkhumbi ozobuyiselwa ubuyela kwiBosphorus futhi [Okuningi ...]
I-Istanbul Island Ferry neHike kuya ku-Havaist Izindiza
Izindiza zase-Island nezindiza ze-Havaist zakhuliswa e-Istanbul. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), amanani entengo yokuhamba komphakathi aqala ukusebenza kusukela namhlanje ekuseni, futhi inani eliphelele lamathikithi eziqhingi ezi-Islands ezinesikebhe esixhumene neDolobha Lines [Okuningi ...]
IMarmaray Ifakiwe Kuhlelo Lokudlulisela Istanbulkart
IMarmaray, esebenza uMnyango Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda, ifakiwe ohlelweni lokudlulisa i-Istanbulkart, isinqumo se-UKOME sisetshenziswa namuhla. Ngakho-ke, izakhamizi ezinamathikithi agcwele okuya eMarmaray ngemuva kwemoto yokuhamba yomphakathi izongena esikhundleni se-7,75 TL [Okuningi ...]
IKarabağlar Metro izophothulwa ngasekupheleni kuka-2020
IKarabağlar Selvili Indawo Yokupaka Ingaphansi komhlaba engaphansi komhlaba ifakiwe emsebenzini namuhla. IMeya yase-Izmir Metropolitan uTunç Soyer, owenza lo mbiko, uthe ngaphandle kokutshalwa kwezimali zokupaka, kuzoqhubeka nokutshalwa kwezimali ngojantshi. Izmir Metropolitan Municipality eKarabaglar Selvili [Okuningi ...]
I-Republic of Turkey State Railways (TCDD) engena 1500 ukhetho ukuvala kuya 356 umphumela ekuhloleni kwakhe ngomlomo ukunxenxa izinsuku ezingaba ngu-190, naphezu ukuhamba esikhethiwe incazelo. Umlomo wabenzi bezicelo abasebenza nge-İşkur [Okuningi ...]
Ngabe i-İZBAN service iqala ngasiphi isikhathi? Kuphela ngasikhathi sini? Nayi ama-Timetables angu-İZBAN 2020; I-İZBAN iyithrekhi enkulu kakhulu yedolobha yezwe lethu exhunywe esikhumulweni sezindiza, isebenza kulayini ongaphansi komhlaba phakathi kwe-Aliağa Selçuk. [Okuningi ...]
UKeçiören Kızılay Metro uzofakwa nini?
Ama-AKM-Gar-Kızılay ongaphansi kwezitimela asebenza, ozohlinzeka ngezinto zokuhamba ngqo phakathi kweKızılay neKeçiören, kuhlelwa ukuthi ziphothulwe ngonyaka olandelayo. Lapho umugqa omusha ungena ekusebenzeni, izakhamizi ngeke zenze i-hop-off hop-off esiteshini se-AKM. UMnyango Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda, oshicilelwe kwiwebhusayithi yakhe esemthethweni [Okuningi ...]
Ukuphendula Okusheshayo Kumasignali Amaphutha eKocaeli
Amathimba okusayinwa axhumene noMqondisi Wamagatsha Abaphathi Abasebenza Ngezimoto eMnyangweni Wezokuxhumana kuMasipala waseKocaeli angenelela ngokushesha ezinhlelweni zokusayina esifundazweni sonke. UKUVIKELA KWAMAHHALA KAMasipala waseKocaeli Metropolitan Izici ezibaluleke kakhulu zomgwaqo [Okuningi ...]